Sefarada - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Jiosy sefarada)
Ny Sefarada na Jiosy sefarada dia iray amin'ireo fizarana lehiben'ny vahoaka jiosy araka ny toerana niaviany ka manondro ny Jiosy tamin'ny Andro Antenantenany nonina tao amin'ny saikanosy Iberika (Espaina indrindraindrindra) sy tao Afrika Avaratra ary manondro koa ny taranak'izy ireo, izany hoe ny fitambaran'ny vahoaka jiosy tsy Askenazy.
Ny Jiosy tao amin'ny faritra be Kristiana tao amin'ny saikanosy Iberika dia voenjika mafy, tsy nitovy amin'ireo Jiosy tamin'ny faritra be Miozolmana, ka nitsoaka avy ao tamin'ny taona 1492 taorian'ny nahazoan'ny Kristiana ny faritra sisa farany nisy Miozolmana sy tamin'ny fanambarana an'i Espaina. Nitsoaka nankany Afrika Avaratra sy tany amin'ireo fari-tany any atsinanana amin'ny Empira otomàna izy ireo, avy eo nanorina vondron'olona maro tany Frantsa, tany Holanda, tany Angletera, tany Italia, tany ami'ireo Balkàna, sns.
Manana ny fiteniny manokana ny Sefarada, dia ny fiteny jodeo-kastilàna, atao hoe fiteny ladino. Manaraka ny fomban'ny Jiosy babiloniana izy ireo, fa tsy tahaka ny Askenazy izay mifikitra amin'ny fomban'ny Jiosy palestiniana.
Anondroana ireo Jiosy avy any Afrika Avaratra sy avy any Atsinanana Akaiky miteny arabo sy persàna sady tsy manana fifandraisana ara-pirazanana amin'ny faritra eoropeana koa ny teny hoe Sefarada. Ny ankamaroan'izy ireo dia nanaraka ny fomba jiosy babiloniana noho ny fifampikasohany amin'ny Sefarada, ka izany no antony anondroana azy ireo amin'ny anarana hoe Sefarada koa.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Sefarada&oldid=975154"
Dernière modification le 1 Oktobra 2019, à 05:37
Voaova farany tamin'ny 1 Oktobra 2019 amin'ny 05:37 ity pejy ity.